Wubetumi Ahyɛ Kristoni a Wagyae Asɛnkakɔ Nkuran
Benada, April 11 no, Kristofo a wɔagyae asɛnkakɔ bebree bɛba Nkaedi no. Saafo yi fii ase tuu nkwa ho mmirika no, nanso nneɛma bi nti wɔate ada. Wɔaka saa nneɛma no bi ho asɛm wɔ San Bra Yehowa Nkyɛn nhomawa no mu. (Heb 12:1) Wɔn a wɔagyae asɛnkakɔ no da so ara som bo ma Yehowa, efisɛ ɔde ne Ba no mogya na ɛtɔɔ wɔn. (Aso 20:28; 1Pe 1:18, 19) Ɛnde, yɛbɛyɛ dɛn aboa wɔn ama wɔasan aba asafo no mu?
Sɛ oguanhwɛfo bi guan yera a, ɔyere ne ho hwehwɛ no denneennen. Saa ara na asafo mu mpanyimfo nso yere wɔn ho hwehwɛ Kristofo a wɔagyae asɛnkakɔ no na wɔboa wɔn. (Lu 15:4-7) Wɔyɛ saa de suasua sɛnea Yehowa dɔ ne nguan no. (Yer 23:3, 4) Yɛn mu biara betumi ahyɛ wɔn a wɔagyae asɛnkakɔ no nkuran; ɛnyɛ mpanyimfo no nko ara adwuma. Sɛ yɛbɔ mmɔden da ayamye adi kyerɛ wɔn na yɛma wohu sɛ yedwen wɔn ho a, Yehowa ani sɔ, na ebetumi ama yɛn ani agye paa. (Mme 19:17; Aso 20:35) Enti kaakae wo tirim hwɛ sɛ obi wɔ hɔ a wubetumi aboa no a. Obi wɔ hɔ saa a, yɛ ntɛm boa no!
MONHWƐ VIDEO A YƐATO DIN HYƐ WƆN A WƆAGYAE ASƐNKAKƆ NKURAN NO. MUWIE A, MUNSUSUW NSƐMMISA YI HO:
Bere a Abbey hyiaa Ɔdansefo bi a na onnim no no, ɛdɛn na ɔyɛe?
Sɛ yɛpɛ sɛ yɛboa obi a wagyae asɛnkakɔ a, adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛka kyerɛ mpanyimfo no?
Bere a Abbey rekɔsra Laura ne mprenu so no, ahoboa bɛn na ɔyɛe?
Bere a Abbey reboa Laura no, dɛn na ɔyɛe a ɛkyerɛ sɛ wampa abaw, onyaa ne ho abotare, na ɔdɔ no?
Yesu mfatoho a ɛwɔ Luka 15:8-10 no, dɛn na yebetumi asua afi mu?
Bere a obiara soo mu bi ma wɔboaa Laura no, mfaso bɛn na efii mu bae?